Khamriyada - Digniinta Chenin Blanc: Laga bilaabo Yummy ilaa Yucky
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Khamriyada - Digniinta Chenin Blanc: Laga bilaabo Yummy ilaa Yucky
Jebinta Wararka Caalamka • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Khamriga & Ruuxa
Chenin Blanc waa canab la dayacay. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah way ka dhib badan tahay Chardonnay ama Sauvignon Blanc inay koraan oo ka dhigaan khamri. Canabku wuxuu u baahan yahay isku-dhafka ciidda iyo cimilada, waxayna caqabad ku tahay khamri-sameeyaha inuu dheellitiro geedkii geedka iyo fursadaha kale ee dhadhanka kobcinaya.
Canabku waa qayb ka mid ah weelka khamriga ee California waxaana laga helaa khamriga cad ee Koonfur Afrika… waxay ku taal dooxada Loire oo keliya in rafcaanka Vouvray uu gaaro awooddiisa buuxda - wuxuu ka socdaa bir ilaa macaan. Waxooga taxaddar ah ayaa lagama maarmaan ah: helitaanka Vouvray ee calaamadda ma dammaanad qaadayso Chenin Blanc wanaagsan. Si looga hortago OOPS, ka dooro soo saarayaasha ugu fiican.
• 2019 Domaine Pinon, Vouvray, Sek. 100 boqolkiiba Chenin Blanc
Vouvray waa khamri cad oo laga soo qaatay canabka Chenin Blanc oo lagu beeray hareeraha webiga Loire ee degmada Touraine ee Faransiiska, bariga magaalada Tours, ee ku taal degmada Vouvray. Appellation d'Origine controlee (AOC) waxa u heellan ku dhawaad ​​Chenin Blanc, canab dahsoon oo yar-yar Arbois waa la ogolyahay (laakin si dhif ah loo isticmaalo).
Maalinta ugu dambeysa ee goosashada PINON ee 30-meeyadii
Viticulture waxay leedahay taariikh dheer aaggan iyo taariikhaha ku laabanaya qarniyadii dhexe (ama ka hor) marka
Kaniisadda Katooliga waxaa ku jiray beero canab ah oo ku yaal keniisadaha maxalliga ah. Canabka waxaa sidoo kale loo yaqaan Pineau de la Loire waxaana laga yaabaa inuu ka soo jeedo gobolka khamriga Anjou qarnigii 9aad oo u haajiray Vouvray.
Qarnigii 16-aad iyo 17-aad Ganacsatada Nederlaand waxay kormeereen beerista beero canabka ah ee aagga si loogu isticmaalo ka ganacsiga khamriga ee suuqyada London, Paris iyo Rotterdam. Canabka ka yimid aagga Touraine ayaa la isku duba ridey isku darka tirada badan ee lagu calaamadiyey sida Vouvray. Maqsinnada khamriga waxaa laga dhisay godad laga sameeyay qodista dhagaxyada tuffeau (limestone) ee loo isticmaalay in lagu dhiso Chateaux ee dooxada Loire. Qabowga, heerkulka joogtada ah ee maqaasiinnada ayaa ku habboon horumarinta khamriga dhalaalaya ee lagu sameeyay hab dhaqameedka champenoise nidaamka wuxuuna caan noqday qarniyadii 18aad iyo 19aad. Vouvray wuxuu noqday AOC sanadkii 1936 waxaana ku jira tuulada Vouvray oo lagu daray 8 tuulo oo u dhow (Chancay, Nouzilly, Vernou-sur-Brenne iyo Rochecorbon).
Gobolka Vouvray wuxuu ku yaalaa meesha ugu sareysa ee taagga, oo ay kala firdhiyaan durdurrada yaryar iyo qulqulka Loire. Durdurrada waxay gacan ka geystaan ​​xaaladaha cimilada gaarka ah ee kor u qaada horumarinta fangaska cinerea Botrytis ee sababa qudhunka sharafta leh ee loo isticmaalo in lagu soo saaro qaabka macmacaanka khamriga.
Cimiladu inta badan waa qaarad saameyn badeed leh oo ka timaada Badweynta Atlaantigga inkastoo ay ku taal in ka badan 100 mayl galbeed. Khamrigu waxay ku tiirsan yihiin cimilada oo leh kala duwanaansho weyn oo canab ah sannad kasta sababtoo ah cimilada isbeddelka ah. Sannadaha cimilada qabow waxay u beddelaan wax soo saarka intiisa badan qaab qallayl oo khamri ah oo ay ku jiraan Vouvray dhalaalaya. Sannadaha cimilada kulul waxay kor u qaadaan soosaarka khamriga macaan, qaabka macmacaanka.
Goobta waqooyi iyo cimilo aad u qabow ayaa ka soo go'a Vouvray mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee lagu dhammeeyo Faransiiska, inta badana soconaya ilaa Noofambar. Noocyada Vouvray waxay u dhexeeyaan qalalan ilaa macaan iyo weli ilaa dhalaalaya oo lagu xusay udgoonka ubaxyada jilicsan iyo dhadhan geesinimo leh.
Midabku waxay u dhexeeyaan caws dhexdhexaad ah (oo loogu talagalay khamriga dhalaalaysa) iyada oo loo marayo spectrum jaalaha ah ilaa dahab qoto dheer (oo loogu talagalay da'da macaan ee Moellex). Guud ahaan, udugga udgoon ee dhinaca khafiifka ah ee daran oo soo diri tilmaamo ah pear, honeysuckle, quince iyo tufaax (cagaaran / jaalaha) ilaa sanka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan tilmaamo jilicsan oo sinjibiil iyo shinni ah (oo soo jeedinaya jiritaanka qudhunka sharafta leh… ka fikir Sauterne). Dhadhanka ku yaal calaacalaha wuxuu u dhexeeyaa caatada, qalalan iyo macdanta ilaa miro iyo macaan (waxay kuxirantahay qaabka).
Sec wuxuu soo bandhigayaa khamri qallalan (in ka yar 8 g/L oo sokor haraa ah; kala duwanaanshaha ugu engegan ee Vouvray) oo badiyaa waa mid degdeg ah oo keena macdanta.
Beerta canabka ah ee Pinon ayaa lagu xusay inay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan gobolka Vouvray oo ay qoysku leeyihiin tan iyo 1786. Francois Pinon wuxuu bilaabay xirfaddiisa cilmi-nafsiga carruurta, isagoo hantidii kala wareegay aabihiis (1987). Pinon waxaa loo arkaa khamri-saare halis ah oo diiradda saaraya viticulture organic iyo faragelinta ugu yar ee khamriga samaynta. Guryaha hadda waxaa maamula Julien Pinon.
Beerta canabka ah waxay ku yaalaan Vallee de Cousse halkaas oo dhoobada iyo ciidda silica ay ku daboolaan saldhig dhagax nuurad ah oo leh dhagax (silex). Pinon waxa ay raacdaa nidaam ay ku jiraan falidda beerta canabka ah, ka fogaanshaha bacriminta kiimikada iyo sunta cayayaanka iyo goosashada gacanta. Dhammaan beeritaanka cusub waxaa lagu sameeyaa massale xulashada (ereyga sii kordhaya ee khamriga Faransiiska ee dib u beerista beero canab ah oo cusub oo leh gooyn ka soo jeeda geed canab ah oo aan caadi ahayn oo ka yimid isla hantida deriska ah); looma isticmaalo xannaanada carruurta. Geedcanabkiisu celcelis ahaan 25 y/o. Hantida waxaa la xaqiijiyay organic sanadkii 2011.
Halsano alkoholku waxay ku dhacdaa foosto alwaax ah waxayna da'doodu tahay birta aan fiicnayn ama foudres (fasasyada waaweyn, qiyaastii laba jeer cabbirka barrique Bordelaise) si loo gaaro dheelitirka u dhexeeya miraha iyo dhimista. Waxaa jira hal rafiiq si looga saaro caleemaha culculus iyo khamrigu wuxuu ku sii jirayaa caleentiisa wanaagsan ilaa dhalada, kaas oo ku jira 12 bilood ka dib goosashada si loo dhamaystiro khamriga. Pinon wuxuu si tartiib ah u shaandheeyaa khamrigiisa si uu u hubiyo xasilloonidooda iyo kartidooda gabowga.
Pinon waxay doorataa 0.6 hektar oo fidsan, meelo badan oo dhoobo hore u socota dhalada ilbiriqsigeeda. Geedaha canabka ah celcelis ahaan 40 sano jir. Miraha gacanta ayaa lagu goostaa, si adag loo kala soocaa oo la riixay. Casiirku wuxuu ku qulqulaa cuf-jiidadka taangiyada si kedis ah halsano-khamiirka dhaladka kaas oo socda 2-3 bilood isagoo si dabiici ah u joogsanaya qolka qabow ee Pinon oo lagu xardhay buurta tuffeau. Khamrigu waxa uu ku dul da'ayahay caleentiisa wanaagsan ilaa 4-5 bilood isku dhafka geedkii la isticmaalay oo u dhexeeya 500-litir oo geed demi-muids ah ilaa 20-hectoliter foudres.
Waxay u soo bandhigtaa huruud huruud ah isha oo waxay siisaa liinta iyo tufaax huruud ah sanka oo ay la socdaan tilmaamo liin ah iyo diirka liin. Dhaxanku waxa uu daaha ka qaadaa khudaar lagu xoojiyay xawaashka iyo liinta. Dhammaystirka dheer wuxuu keenaa macdanta oo dheellitiran oo la safeeyey. Waxay si fiican ugu lamaanaysaa salmon iyo tuna.
Halkan ka akhri qaybta 1-aad: Barashada ku saabsan khamriga Dooxada Loire Axadda NYC
Halkan ka akhri qaybta 2-aad: Khamriga Faransiiska: Wax soo saarkii ugu xumaa tan iyo 1970kii